Tannenberg: nhau muFPS zvichibva paHondo Yenyika I | Linux Vakapindwa muropa
Tannenberg: nhau muFPS zvichibva paHondo Yenyika I
M2H neBlackmill Mitambo yakaburitsa zvimwe zvitsva zvemutambo wevhidhiyo Tannenberg. Iri zita, kune avo vasingazive, mutambo wevhidhiyo weFPS unobva paHondo Yenyika I. Neiyi nyowani yemahara yemukati yekuvandudza uchave uine mepu nyowani yekunakirwa, mukuwedzera kune zvese izvo mutambo wepasi uyu watove nawo.
Iwe unotoziva kuti vese Tannenberg naVerdun (rimwe remazita avo ekare) akagadzirirwa kuti ave echokwadi enhoroondo. Ndokunge, ivo vanoedza kuita zvese sezvazviri sezvazvinogona, pamwe nekushongedza uye zvese zvakaitika muHondo Yenyika I. Nemepu iyi nyowani iwe unowana zvimwe zve izvo ne kuiswa kwePrzemyśl. Mariri iwe unowana mepu inonakidza kwazvo yekutamba pairi, ine nzvimbo dzinonakidza dzakashama uye nhare dzinoverengeka dzekutora.
Kunyanya, sekutaura kwevagadziri, muguta rino raive nezita rakafanana neyaPrzemyśl nhare, nhevedzano yezvidziviriro ine masvingo makumi mana nemasere aizovakwa. Asi kuvaka kwakamira uye hukama hwehukama hwakatanga pakati Austria-Hungary nehumambo hweRussia kubva muna 1854 kusvika pakutanga kweHondo Yenyika I.
Asi 7 1914 October maRussia akaedza kurwisa nzvimbo ino. Pakanga paine zviuru gumi zvakaurayiwa pakati peavo vakashungurudza uye vangangoita zviuru mazana matatu nemazana mashanu vakafa. Kukomba kwacho kwaizogara kusvika Kurume 10.000, 3.500, apo vadziviriri vakasara vakasarudza kuzvipira kana chikafu nehunhu zvapera. Panguva iyoyo, varume zviuru makumi mapfumbamwe nezvisere vakatapwa.
Iye zvino unogona kuongorora iyi hondo kubva mukati nezviri mukati kubva kuTannenberg. Nenyaya dzese idzi nhau kubva kuPrzemyśl yemahara uye kudzikisira kukuru uko mutambo wevhidhiyo une paHumble Store uye Steam, inozosara iri 50% inopa kusvika Chikunguru 30. Naizvozvo, mukana wakanaka wekuti uchengetedze maeuro mashoma muzhizha rino ...
Kana iwe uchida kutenga izvozvi mutambo wevhidhiyo uye uku kuwedzera, unogona kuenda kuchitoro chako chemavhidhiyo chemavhidhiyo Mhepo yeValve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Tannenberg: nhau muFPS zvichibva paHondo Yenyika I
KaOS 2020.07 inosvika neKernel 5.7.8, KDE Plasma 5.19.3 uye nezvimwe
Meow: kurwisa kunoparadza data mune DBs isina kudzivirirwa kubva kuElasticsearch neMongoDB